Maka: isitolo sokulanda kwidijithali
Isungulwe ngo-2005 ukusiza ababambisene nabo ekuthengiseni izimpahla zeqembu lakhe, iBig Cartel manje seyinabaculi abazimele abangaphezu kuka-400,000 emhlabeni jikelele. Ipulatifomu yabo ye-ecommerce yakhelwe ngqo ukusiza abadali ukuthi bathole imikhiqizo yabo online. Nayi ividiyo evela kwelinye lamakhasimende abo, iLong Live the Swarm, umqambi wezingubo. IBig Cartel inikeza izinzuzo nezici ezilandelayo: Ukusetha okusheshayo - Thola isitolo esilula ku-inthanethi ngemizuzu. Isebenziseka kalula - inikezela ngefayela le-